Iyiphi indlela engcono yokufumana i-backlink yangaphandle ye-SEO?
Masibhekane nayo - ukwakha i-backlink zangaphandle ze-SEO ngenye yezinto eziphambili ezinokuqhuba iwebhusayithi yakho okanye iblogi ukuba ibonakale kakuhle kwi-intanethi. Kodwa ngaphambi kokuba uqale, qwalasela le nyaniso embi malunga nokwakha kwi-injini yokukhangela injini. Ngoko, qiniseka ukuba ulungele ngezi zinto ezilandelayo ngaphambi kokuba uqhubeke ngokuqhubekayo nokufumana i-backlink yangaphandle kwi-SEO:
Kufuneka ube newebhusayithi okanye iblogi yakho kakuhle kwizinga lobugcisa.
Kufuneka ukwakhiwe isakhiwo sokwakha esiqinileyo.
Kufuneka utyalomle ixesha lakho kunye nomzamo ube ngumxholo oyingqayizivele oza kuzisa ixabiso. Nazi ezinye iindlela ezilungileyo zokufumana i-backlink zangaphandle kwi-SEO:
1. Khetha ithuluzi lokutshintshela i-link, njenge-Semalt Analyzer, i-Screaming Frog SEO Spider, i-Moz's Open Site Explorer-ndawavavanya ukuba benze iiwebhu kunye neeblogi. Sisebenze kakuhle ekulungiseni zonke iipostiki zobugcisa ezinokuchaphazela amava omsebenzisi ngala maphepha alandelayo:
Uyilo lwewebhu oluphendulayo lweselula kunye namava omsebenzisi.
Umxholo wephepha webhuphiswano, kunye ne-dupta yeMetadata.
i-302 iphinda ibuye iphinde iqondise iminyango.
iimpazamo ezingama-404 kunye nazo zonke iziphene ze-canonical.
Ukusetyenziswa kakubi kwe-backlink zangaphandle kunye nezikhokelo ze-SEO (e. g. , noindex, nofollow).
2. Gxininisa kwiimfuno zomsebenzisi, kungekhona nje ukuxhaphaza nge-Google's search algorithm. Ndiyathetha apha ukuba umxholo wakho MELE uvelise ixabiso langempela kwaye nceda umsebenzisi. Ngaloo ndlela, utyalomali ixesha lakho nomzamo wokwakha i-backlink yangaphandle ye-SEO-uzuze ngokwemvelo kunye nomxholo wakho - qiniseka ukuba unayo ubuncinane ubunzima kwezi zilandelayo:
Umxholo wakho uhluleka ukukholisa umsebenzisi wangempela (imibhalo emide kakhulu okanye emnandi, engayi kubhenela kwiimfuno eziphambili zabaphandi abaphilileyo).
Umxholo okwexesha elide (khumbula - iwebhusayithi yakho okanye iblogi kulindeleke ukuba udlale kunye nalo kwaye uncede umsebenzisi ngaphezu kweincinci zakho).
Akunelanga ngokwaneleyo uphando lweedatha (ngokuqinisekileyo, ukuba negunya elininzi lingakuhle ukufumana uphando lweGoogle, kodwa kusenelungelo lokuphumelela).
Ukungabi nokufundwa kunye nobuntu (cinga ukudala izifundo zakho zecala, izipredishithi ezithatha amehlo, i-infographics, kunye naluphi na umxholo obalulekileyo okhangayo kulaba bantu abajoliswe kuzo).
Isibheno esingabonakaliyo esibonakalayo (yenza kube lula ukufunda kunye neengongoma zeblotshi, izihloko ezifanelekileyo, kunye nezintlu ezichazayo, sebenzisa kuphela iibhloko ezithwalayo zokubhala umbhalo, izihloko eziphosakeleyo kunye nemifanekiso, kunye neenkcukacha ezibonakalayo ezibonakalayo kunye nezizinda ezifanelekileyo).
3. Indlela yodwa yokufumana i-backlink yangaphandle ye-SEO ngokwasemthethweni iyakha ubudlelwane. Masijongane nayo - iwebhusayithi yakho okanye iblogi ayikho isiqithi esikude esahlukaniswa ngamanzi olwandle. Ukunxibelelana kuphela okwakhiwe kakuhle kunye nobudlelwane obuphilileyo kunokukhokelela ekufumaneni i-backlink ezinamandla kwaye kufumaneka ngokubanzi kwiWebhu. Ukuze uzuze kwinkqubo eqhuba ngendlela ephantse iqhutywe yile ndlela ilandelayo:
Ukunikezela okungakumbi kunye nomxholo wakho kunokukuvumela ukuba ungayifumani kuphela i-backlinks ekhomba kwiwebhusayithi yakho okanye iblogi ngokubuyisela kodwa uncede iwebhusayithi yakho okanye iblogi yenza iikhokelo ezininzi, izabelo, zilandele, njl.
Ukusungula ubudlelwane obuqinileyo kunye ngokuxhamlayo kunye nabachaphazeli bezoshishino kunye neebhloko eziphezulu. Ungalokothi unqande kuloo nto idabukisayo kunye engaqhelekanga engenakusiza nge-imeyile ebanda.
Ukubhala ezinye iingcamango ezicacileyo kunye neengcamango ezichaphazelekayo kwiiblogi ezivakatyeweyo phezulu okanye kwiiwebhusayithi ezithandwa kakhulu kwi-shishini lakho shishini okanye kwi-market niche.
Ukuguqula iwebhusayithi yakho okanye iblogi ibe yinto efanelekileyo, ufanele ufumane ezi zinto zixabisekileyo. Ndiyathetha ukuba unokwenza izinto eziphathekayo ngamaqendu akho, izithuba okanye ukuvakasha kweendwendwe ezixabisekileyo kwezinye izihloko ezitshisayo okanye ezifunwa kakhulu kunoko-ukuze ukhuthaze umxholo wakho ngokwemvelo uze ubonakale kubasebenzisi abaninzi abanomdla kwi-intanethi kunokwenzeka. Ukugqitywa, khumbula ukuba injongo yakho yokugqibela kukuba kukunandipha izimvo ezingenakubalwa kunye nezabelo ngeendaba ezithandwayo zentlalo - nje emva kweeyure emva kokupapasha ukuhlaziywa kwakutshanje, ukuhlaziywa okutsha kwimixholo, okanye entsha mveliso okanye inkonzo. Ngoko ke, ndincoma ukuphonononga kwisihloko esibanzi soPhuculo loKhuphiswano lwakho lwexesha elizayo. Oku kuya kuhlala kuhlawula, ndiqinisekile Source .